XOG: Kenya Oo Fasaxday Duulimaadyada Diyaaradaha Soomaaliya ee ay horey u joojisay.
June 10, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 0
NAIROBI(P-TIMES) – Sida ay cadeynayso xog Diblumaasiyadeed oo soo gaartay Warsidaha PuntlandTimes, dawladda Kenya ayaa fasaxday duulimaadyada Diyaaradaha ee imaan jiray Kenya, aadina jiray Soomaaliya, ka dib markii ay horey arrintan iskugu afgarteen dawladda Faderaalka & Kenya, laakiin ay Nairobi ka baxday.
Wasaarada Arrimaha dibada ee Kenya ayaa qoraalka Hoose u soo dirtay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Warar hordhac ah ayaa cadeynaya in ay Kenya qoraal ay ku cadeynayso go`aankeeda cusub u soo gudbisay Hay’addaha La socodka Hawadda ee Soomaaliya, iyadoo sheegtay in ay go’aankaas ka laabatay.
Wada hadal kooban oo horey u dhexmaray Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Eng Maxamed Xuseen Rooble & Madaxweynaha Kenya ayay kasoo baxday arrintan, balse Kenya ayaa dib u dhigtay fulinta go`aankaas.
Dhawaan Nairobi waxay casumaad u fidisay Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Eng, Rooble, balse booqashada ayaa fashilantay markii ay diiday dawladda Faderalka ee Soomaaliya, tas oo ka dhignayd dibir siyaasadeed oo gaartay Nairobi.
Qaraarka ay qaadatay Kenya ayaa noqonaya mid culeys badan ka dajinaya dad badan oo Soomaaliyeed una safrayay dalka Kenya ama ka imaanayay oo tagayey Soomaaliya, taas oo ahayd culeys soo kordhay maalmihii u dambeeyey.
Xariirka u dhaxeeya Soomaaliya & Kenya ayaa ahaa mid dhaawacan mudooyinkii lasoo dhaafay, labada dal ayaana isku haya arrimaha muranka Xaduudaha, gaar ahaana Nairobi oo sheegaynaysa in ay leedahay qeyb kamid ah Badda Soomaaliyeed, haddana ay doonayso in miiska wada xaajoodyada lagu xaliyo.